HARGAYSA: Gabadh Tax ay Kiraysatay Lagu Afduubtay Kadib Markii uu Laamiga Cagta u Saaray
Hargeisa (Dalmar-News) – Ciidamada Ilaalada Wadooyinka Ee Caasimada Hargeysa ayaa maanta gacanta ku dhigay gaadhi ay mudo badan ku daba jireen loona haysto faldanbiyeed ugub ah oo uu ku kacay gaadhigan Noociisu yahay ama loo yaqaan Dukhaan Ama Taxi lambarkeeduna yahay 58037, Dhacdo danbiyeedka Gaadhigan loo haysto ayaa lagu sheegay inuu afduubtay Gabadh ka mid ah haweenka ku nool caasimada hargeysa.
gabadhan oo markii ay kiraysatay ak dib u raacday in uu u adeego maadaama gawaadhidan ay yihiin kuwa loogu talogalay inay bulshada isticmaalaan nasiib daro se uu wadihii gaadhigu isku dayey inuu gabadhan Afduubo iyada oon ilaa hada la garanayn sababta dhabta ah ee ka danbaysa falkan iyo in ay hore wax iga dhexeeyeen haweenaydan.
ka dib markii ay gabadhu aragtay xaalada in aanay ahayn tii ay u socotay una kiraysatay gaadhigan hadalana lays dhaafsaday waxay goaan satay inay iska tuurto gaadhiga nafteedana miidaamiso basle wax agabadha soo gaadhay Dhaawac Culus.
ciidamada taraafikada oo arrinkan loo sheegay ayaa si weyn u baadi goobay halka uu cago dhigtay gaadhigan iyaga oo ku daba jirya in muddo ah waxaanay ugu danbayn ka haleen isaga oo taagan meel Parking ah oo ku taala wadada halbawlaha ah ee caasimada gaar ahaan
agagaarka Telefishanka Horn Cable .
Iyadoo Gaadhigana Lagu Qaaday Ama Lagu dalacay Wiish Ka mid ah kuwa ciidamada nabadgelyada wadooyinku, Ma jirto Wali Faah Faahin ay ka bixiyeen ciidamada nabad sugida wadooyinka oo iyagu gacanta ku dhigay gaadhigan, wixii ka soo kordhana waanu idinla soo socodsiin.
balse shacabka caasimada Hargeysa iyo guud ahaan kuwa Somaliland ee gaadiidkan is ticmaala ayaa looga baahan yahay inay taxadar badan ka muujiyeen raacista gawaadhidan maadaama ay khatar horleh soo kordhiyeen, horena ay ugu kaceen dhacdooyin badan oo kala duwan,
halka mar marka qaar iyaga la afduubo oo ay maafiyo ama tuug hubaysani kiraystaan ka dibna ay dib u baadhaan wadaha gaadhiga sidii ku dhacday maxamed oo ahaa darewal ka shaqaysta magaalada hargeysa gudeheeda oo inta magaalad alaga saaray cidlo indhaha lagaga xidhay loogana dhaqaajiyey kelidii halka ay gaadhigiina ku baxsadeen tuugtii.